I Palestina dia faritra ara-tantara sy ara-jeôgrafia ao Atsinanana Akaiky izay eo anelanelan' ny Ranomasina Mediteranea sy ny tany efitra ao atsinanan' i Jordania sy ao avaratr' i Sinay. Efa hatramin' ny taonjato faha-5 tal. J.K. no nahalalan' i Herôdôtôsy ny anarana hoe Palestina, nefa ny emperora Hadriano tamin' ny taonjato faha-2 no nanome izany anarana izany amin' ny fomba ôfisialy an' io faritra io mba hamaizany ny Jiosy (na Jody) tamin' ny fikomiana nataon' izy ireo tamin' ny taona 132-135 taor. J.K.
Sarintabnin'i Palestina na Kanaana, taona 1853.
Ny faritra tondroina amin' ny hoe Palestina dia tsy voafaritra mazava. Ny ivony dia ao amin' ny faritr' i Galilea sy i Samaria ary i Jodea. Ny fetrany ao avaratra dia i Foinikia (na Fenisia) sy ny tendrombohitra Libàna (na Libanona) ary ao atsimo i Filistia sy i Idomea. Tamin' ny vanimpotoan' ny tafika vokovoko (kroazada), i Perea ao avaratra atsinanan' ny Ranomasina Maty sy i Batanea ary i Dekapôlisy any ampitan' ny ony Jordàna dia miankina aminy. I Palestina dia mety ilay faritra ao andrefan' i Jordana fotsiny ihany. Ny teny hoe Palestina dia nampiasaina koa ho solon' ny hoe Tanin' i Israely.
Ny faritr' i Palestina ankehitriny dia mahafaoka ny Fanjakan' i Israely, ny fari-tany palestiniana voabodo, ny sombin-tanin' i Gaza ary indraindray koa ny ampahan' ny fanjakan' i Jordania, i Libàna Atsimo ary ny lembalemban' i Golàna.
Ara-tantara dia mifanandrify amin' i Kanaana sy ny Tanin' i Israely sady nikambana tamin' ny faritr' i Siria (Siria-Palestina) i Palestina. Araka ny lovantsofin' ireo fivavahana abrahamika dia i Palestina no ilay Tany nampanantenaina ny Zanak' i Israely, ny Tany Masin' ny kristianisma ary tany masin' ny finoana silamo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Palestina&oldid=1011532"
Dernière modification le 16 Mey 2021, à 08:07
Voaova farany tamin'ny 16 Mey 2021 amin'ny 08:07 ity pejy ity.